Hutungamiri hwesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ hwamiswa pamberi pedare ramejastiriti muHarare nhasi huchipomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act zvichitevera kuratidzira kwavakaita vakatakura bhokisi rinotakurirwa chitunha.
Nhengo dzeArtuz nomwe dzinosanganisira mutungamiri wesangano iri VaObert Masaraure negweta ravo VaDouglas Coltart nemumwewo mugari wemuHarare VaSimon Peter Drury vatanga kutongwa mudare remejasitiriti vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo pakuratidzira kwakaitwa nenhengo dzeArtuz muHarare muna Kurume dzichitsutsumwa nenyaya dzemari dzemihoro.
Muchuchisi wenyaya iyi, VaOwen Safuri, vaudza dare kuti vasungwa vapfumbamwe ava vakatyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act pavakaratidzira pamahofisi egurukota rezvemari vakatakura bhokisi rinoiswa chitunha senzira yekuratidza kusafara kwavo nemari dzavari kutambiriswa nehurumende.
Pavabvunzwa nemutongo wedare, Amai Rumbidzai Mugwagwa, kuti vanopindura sei mhosva yavari kupomerwa, vasungwa vese vari vapfumbamwe vati havana mhosva.
Magweta avo audza dare kuti vasungwa ava vari kungoshungurudzwa. Rimwe remagweta aya, VaJeremiah Bamu, vaudza dare kuti nhengo dzeARTUZ dzine kodzero dzekuratidzira kumushandirwi kana dzisiri kufara nemari dzemihoro sezvo izvi zviri mubumbiro remitemo.
VaBamu vati vamwe vevasungwa ava vakafanana naVaColtart vanove gweta reARTUZ pamwe naVaDrury vakasungwa vasinei nekuratidzira kwakaitwa neARTUZ. Gweta raVaDrury, Muzvare Fadzai Mahere, vati VaDrury munhu aitongopfuurawo zvake nepahofisi paVaMthuli Ncube. VaBamu vati izvi zvinoratidza kuti nyaya yehurumende haina kusimba.
Nyaya iyi iri kuenderera nemusi weChitatu mberi nekutongwa uye hurumende inoti ine vafakazi gumi vachauya kuzopa humbowo.
Nhengo dzeARTUZ dzave nenguva dzichiramwa mabasa dzichiti mari yemihoro yadziri kupihwa nehurumende yakafanana nemutero wembwa ukuwo hurumende ichiti homwe yayo yakabooka zvekuti haikwanisi kupa vashandi vayo mari yavarikuda.
Zvichakadaro, ARTUZ yaburitsawo mashoko kuvatori venhau ichiti zvinhu zvange zvisina kurongeka kumatare sezvo nyaya yavo yange ichingochinjwachinjwa vatongi vasati vaendeswa pamberi paAmai Mugwagwa.
ARTUZ yatiwo nyaya yanonoka kutanga kuzeyiwa nedare sezvo mufakazi wekutanga wehurumende ange asipo.